I-Big Family Lodge eduze ne-ARK Sleeps 18 - I-Airbnb
I-Big Family Lodge eduze ne-ARK Sleeps 18
Williamstown, Kentucky, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jeremiah
U-Jeremiah Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa endaweni yakho yokuhlala entsha lapho uvakashele i-Ark Encounter! Ukuhamba ngemizuzu eyi-12 kuphela ukuya eMphongolweni, leli khaya elihle lilungele amaqembu amakhulu nemindeni. Kungakhathaliseki ukuthi uhleko emlilweni, ukuphumula echibini, noma ukwenza izinkumbulo etafuleni lesidlo sakusihlwa, uzoqiniseka ukuthi izinkumbulo ezenziwe lapha zizohlala njalo.
Ihlanganisa namakamelo okulala ayi-7, amabhavu angu-3.5, indawo yokucima umlilo, indawo yokuhlala enkulu, indawo yokubhukuda engaphandle, ichibi lokudoba, itafula lokubhukuda, amathani emidlalo, kanye neshelufu lezincwadi eligcwele, isikhathi lapha sizondiza nakanjani!
Indawo yethu yokulala inamakamelo okulala ayi-7 namagumbi okugezela angu-3.5, ikhishi eligcwele izinto eziningi, kanye negumbi lokuphumula elikhulu ngokwanele ukuhlala wonke umndeni! Singalala izivakashi eziyi-16 ngokunethezeka, okuhlanganisa no-1 kusofa.
Leli khaya libuye libe nokungena okungenakhiye, i-WIFI, ichibi lokubhukuda (ngenkathi yehlobo), ikhebula, ichibi lokudoba i-w/patio, indawo yomlilo wekamu, i-w / propane grill, kanye novulandi ohlolwe.
Ukupaka akunankinga, kune-driveway kanye nephedi yokupaka enkulu ngokwanele kunoma yimuphi usayizi weqembu.
Amagquma, ukubukwa kwemvelo, nomsindo opholile wemvelo nakanjani kuzoletha ukuphumula kubo bonke abahambi.
Imininingwane ngamalungiselelo okulala:
Igumbi lokulala 1 (isitezi sokuqala): "Igumbi Lemidlalo Yasendle!" I-Queen bed, igumbi lokugezela eligcwele.
Igumbi lokulala 2 (isitezi sokuqala): "Igumbi lezinyoni!" I-Queen bed, i-futon yosayizi ogcwele.
Igumbi lokulala lesi-3 (isitezi sesibili, i-Master Suite): Umbhede wendlovukazi, indlu yokugezela eyize yangasese ephindwe kabili, nobhavu omkhulu.
Igumbi lokulala lesi-4 (isitezi sesibili): "Igumbi likaKaputeni!" Umbhede ogcwele, intandokazi yesivakashi!
Igumbi lokulala 5 (isitezi sesibili): "Igumbi leZebra!" I-Queen Bed, imibhede engamawele emi-2.
Igumbi lokulala lesi-6 (isitezi sesibili): "Igumbi Lendlovu!" Imibhede emibili w/isibuko sakudala.
Igumbi lokulala lesi-7 (isitezi sesibili): "Igumbi likanogwaja!" Umbhede Wenkosi.
Kunendlu enkulu ebonisiwe kuvulandi, elungele ukufundwa ngosuku olunomoya ohelezayo.
Lapho ungena endaweni yokulala, kunendawo yokuhlala enkulu enepiyano. Okunamathiselwe yindlu yokudlela exhuma ekhishini. Kunezicabha zesikrini echibini elingaphandle ngaphandle kwekhishi. Ngaphandle kwekhishi kukhona ikamelo elikhulu le-rustic elinetafula le-pool, i-TV, nendawo yomlilo. Ngaphandle kwekhishi kukhona indawo yokungena emakamelweni okulala ama-2 kanye negumbi lokugezela eli-1 eligcwele (igumbi lokulala lokuqala).
Esitezi esiphezulu kunamakamelo amaningi okulala, kanye namagumbi okugezela ama-2 agcwele.
Itholakala emaphandleni amahle, omakhelwane bakho bangamagquma nemvelo! Usuhambe kalula imizuzu eyi-12 ekuphumeni kwaseWilliamstown kanye nendawo yokupaka i-Ark Encounter! Leli khaya alilungile kuphela kuzivakashi ze-Ark Encounter, kodwa noma yiliphi iqembu elikhulu elivakashela umshado e-The Josephina Event Venue, Creation Museum, Bourbon Trail, Kentucky Horse Park, nanoma yimuphi umcimbi eCincinnati! Kukhona incwadi yesandla ohlwini yezincomo zasendaweni nge-brunch, ikhofi, nesidlo sakusihlwa!
Lonke ikhaya lihlelelwe wena!
Ukuxhumana kungathunyelwa ngemiyalezo ngesiteshi esibhukhiwe.
UJeremiah Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Williamstown namaphethelo